Home » News » Bannister Lake wuxuu ku dhawaaqay Iskaashiga Waalidiinta Mashruuca Mashruuca Mashruuca Habka Maqalka
Bannister Lake wuxuu ku dhawaaqay Iskaashiga Waalidiinta Mashruuca Mashruuca Mashruuca Habka Maqalka
CAMBRIDGE, Ontario - Nov. 8, 2018 - Bannister Lake waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inay wadashaqeyn la leedahay shirkadda Motion Path ee xarunteedu tahay Montreal si ay u bixiso xalal dhamaystiran xogta muuqaalka ee warbaahinta iyo isgaarsiinta muuqaalka. Bannister Lake oo ah barnaamijka maareynta xogta awoodda badan, hababka horumarinta ee gaarka ah, iyo khibradda fulinta oo ay weheliso awoodda naqshadaha casriga ee Motion Path ee ku guulaysta waxay abuureysaa hufnaan cusub oo sheekooyin cusub ah iyo fursado loogu talogalay warshadaha iyo wax soo saarayaasha cayaaraha, kooxaha xarumaha, kuwa wax soo saara, iyo shabakadaha saxda ah.
Bannister Lake waxay bixisaa wacyigeliyayaal farsamaysan oo awood leh oo maareynta maareynta xogta noolaha ee awoodda badan, oo u oggolaanaya qaabab kala duwan oo xog ah in la kala saaro, la edebiyo, dhexdhexaad ah, iyo istaraatiijiyad ahaan loo qeybiyo. Xogtu waxay u muuqataa in ay hawada ku jirto foomka diyaargarawga, cayayaanka ciyaaraha, shaxanka casriga ah, iyo walxaha sheyda. Motion Path ayaa xayiray astaanta gaarka ah ee warshadaha iyo warshadaha dhijitaalka ah ee digital-ka ah iyagoo adeegsanaya adeegyo sawir gacmeed gaar ahaan loogu talogalay jawi-noolaha xogta nool. Marka la isku daro labada, xogta Bannister Lake waxay ku darsan doontaa sawirada Motion Path, oo bixisa isku-dhafnaan xooggan ee injineernimada muuqata, hawlaha cusub ee waxsoosaarka waxsoosaarka, iyo naqshadaynta jilicsan.
"Inaad haysato lamaane xooggan oo caalami ah sida Motion Path wuxuu naga caawiyaa inaan ku darno qiimaha iyo waxtarka macaamiisha kuwaas oo raadinaya hab dabacsan oo awood leh oo lagu soo koobi karo sawirada xogta xogta laga helo ilo kasta," ayuu yiri Georg Hentsch, oo madax ka ah Bannister Lake. "Waxaan leenahay waaya-aragnimo aad u fiican oo dhowaan ka shaqeynaysa doorashooyinka Ontario oo leh TFO waxaanan rajeyneynaa in aan ka wada shaqeyno mashaariic badan oo xog badan oo mashaariic ah."
"Bannister Lake xogta xogta waxay siinaysaa macaamiisheena si toos ah oo loo maareeyo nidaamyada xogta adag oo si quruxsan u gali doona nashqadaheenna," ayuu yiri Anton Maximovsky, oo madax ka ah Motion Path. "Marar badan, maareynta xogta waxay ahayd wax macaamiishayaga ah ay kufilan yihiin, baahida loo qabo in ay dhisto xeelad ama dhisaan waxa laga filayo. Iyagoo isku xiraya sawirkayaga si loo xaliyo Bannister Lake, waxaanu furay fursado badan oo waxtar badan oo macaamiisheena ah. "
Bannister Lake iyo Motion Path labadaba waa khabiiro doorasho oo hufan waxaana ay bixiyeen macaamiisha muusikada hababka software-ka ee tartanka doorashooyinka iyo xirmooyinka garaafyada doorashada. Shaacinta wada-shaqeynta maantadani waxay xoojin doontaa bixinta doorashooyinka shirkadaha iyo bixinta xal dhammaystiran oo dhamaystiran oo loogu talogalay soo saarayaasha doorashada. Iskaashatada ayaa sidoo kale ka caawiya awoodda Horumarinta Motion Path ee ka shaqeynaya xaqiiqada dhijitalka ah iyo xaqiiqda la kordhiyay iyadoo lagu darayo qalabka xogta Bannister Lake si loo soo bandhigo bandhigyada hawada. Marka laga soo tago doorashooyinka, labada shirkadood ayaa rajeynaya in ay bixiyaan xalal casriyeyn dhab ah oo muuqaal ah ee isboortiska, wararka dhaqaalaha, dhacdooyinka, eSports, iyo calaamadaha dhijitaalka ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Bannister Lake ee wadashaqaynta Motion Path iyo xalalka Bannister Lake, fadlan la soo xiriir Vern Freedlander, iskaashiyada istiraatiijiga ah.
Ku saabsan Motion Path.
Motion Path waa bixiye adeegyo hal-abuur leh oo xooga saaraya sawir-qaadashada 3D-da ee waqtiga telifishinka ah. Kooxdu waxay ka koobnayd shaqaale xirfadlayaal ah oo ka soo jeeda caalamka oo soo bandhigay qaar ka mid ah wax soosaarka ugu sarreeya teleefishinka oo ay ka mid yihiin xirmooyinka Super Bowl; taxanaha aduunka; Doorashooyinka Madaxtooyada; iyo wargeysyada ABC, NBC, CNN, CNBC, ESPN, FOX News, SPORTS SPORT, iyo kuwo kale oo badan. Kooxdu waxay sidoo kale ku guulaysatay abaalmarino farabadan oo qiimo leh oo loogu talogalay shaqada mashaariicda naqshadaha ee Maraykanka, Kanada, iyo Yurub. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa www.motion-path.com.
Ku saabsan Bannister Lake
La wadaag on Twitter:twitter.com/intent/tweet?text=.@BannisterLake%20partners%20with%20live%20data%20graphic%20design%20firm%20%23MotionPath%20to%20provide%20complete%20%23datavisualization%20for%20the%20broadcast%20and%20visual%20communications%20industry.%20-%20http://bit.ly/2QvQFzc
xayawaanka badda Broadcast Engineer Broadcast Engineering xalinta horumarka gaarka ah software maareynta xogta dhexgalka Macluumaadka Live Graphic Design Company Habka Maqalka Partnership Spears & Fiilooyinka TV Technology Video Engineer xaqiiqada dalwaddii	2018-11-08
Previous: Abuuritaanka Sun Pictures Sawirada: Joannah Anderson Waraysi
Next: Cinwaanka casriga ah ee loo yaqaan 'Red Digital Cinema' si loogu marti qaado sheeko la xiriirta sawiristo Sandra Valde-Hansen At 2018 Camerimage
Archives Select Month January 2019 (187) December 2018 (243) November 2018 (406) October 2018 (496) September 2018 (495) August 2018 (397) July 2018 (876) June 2018 (869) May 2018 (871) April 2018 (831) March 2018 (779) February 2018 (684) January 2018 (605) December 2017 (396) November 2017 (712) October 2017 (835) September 2017 (608) August 2017 (583) July 2017 (710) June 2017 (543) May 2017 (621) April 2017 (695) March 2017 (704) February 2017 (340) January 2017 (364) December 2016 (606) November 2016 (344) October 2016 (556) September 2016 (622) August 2016 (1056) July 2016 (532) June 2016 (414) May 2016 (505) April 2016 (713) March 2016 (743) February 2016 (382) January 2016 (123) December 2015 (357) November 2015 (327) October 2015 (152) September 2015 (259) August 2015 (440) July 2015 (276) June 2015 (140) May 2015 (128) April 2015 (435) March 2015 (289) February 2015 (298) January 2015 (131) December 2014 (103) November 2014 (194) October 2014 (149) September 2014 (381) August 2014 (250) July 2014 (287) June 2014 (363) May 2014 (231) April 2014 (744) March 2014 (560) February 2014 (427) January 2014 (289) December 2013 (137) November 2013 (545) October 2013 (290) July 2013 (26) May 2013 (13) April 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)